Nagu saabsan - KORINTA -Elec
RAISING-Elec oo la aasaasay 2000 wuxuu ku yaal Magaalada Houjie, magaalada Dongguan wuxuuna leeyahay ku dhawaad ​​180 shaqaale iyo 2 warshadood oo ku dhow 10,000 mitir oo laba jibbaaran hadda. Waxaan nahay OEM/ODM soo -saare xirfadle ah oo diiradda saaraya shaabadaynta birta iyo mashiinnada & CNC, isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo taageeraya waxaanan siinnaa “hal joogsi” taageero macaamiisha dhammaan taxanaha biraha, sida tuurista dhinta, dhejiyaha, boolal iyo ilo. Iyadoo 20 sano oo waayo -aragnimo soo -saarka biraha ah iyo taageerada in ka badan 100 wada -hawlgalayaasha wax soo saarka biraha, waxaan hore u noqon khabiir ku ah beerta biraha.
Waxa aan samayn karno
Qiimaha gaarsiinta macmiilkayaga
1. waxaan ku siin karnaa adeegyo hal joogsi ah dhammaan noocyada alaabada birta ee la habeeyay oo ay ku jiraan shaabbadaynta, farsamaynta, shubista dhinta, dhejiyaha iyo guga.
2.waxaan raaci karnaa shuruudaha macmiilka iyo dalabyada si aan si dhakhso leh u naqshadayno caaryada.
3.waxaan ka caawin karnaa macaamiisha inay yareeyaan qiimaha oo ay yareeyaan waqtiga hogaaminta.
4. waxaan ku talin karnaa alaab -qeybiyeyaasha nooc kasta oo alaab ah haddii macmiilku u baahdo
Maxaad U DOORAN KARTAA？
● 1. Kor u qaadistu waxay leedahay khibrad wax soo saar biraha 20 sano iyo in ka badan 100 la -hawlgalayaasha soo -saarka biraha, waxaan siin karnaa macaamiisheenna talo -xirfadeed waxaanan kor u qaadi karnaa tartankooda qiima -dhimista iyo soo gaabinta waqtiga hoggaaminta.
● 2.Waxaan ku leenahay 10 injineero xarunteena R&D, dhammaantood waxay leeyihiin khibrad ka badan 15 sano xagga naqshadaynta caaryada.
● 3. Xakamaynta Tayada Adag: Kor u qaadistu waxay dhaaftay ISO9001 iyo IATF16949, waxaan hore u haysannay ku dhawaad ​​20 sano oo waayo -aragnimo soo -saar biraha ah, waxaan jeclaan lahayn inaan baro aasaaska nidaamyada tayada iyada oo la adeegsanayo aaladda, ka dhig shaqaalahayaga faham weyn sida loo kulmo rajooyinka sii kordhaya ee macaamiisha iyo yoolalka tayada. Jid ahaan, waxaan leenahay koox tayo buuxda leh oo ay ku jiraan IQC, IPQC, QE, iyo OQC, oo aan raacno maareyn ku habboon si loo baaro badeecadaha, kahor soosaarka ballaaran, QA waa inay tijaabisaa alaabta ceyriinka ah, dhammaan alaabada dufcaddu waxay leeyihiin MAYA gaar ah oo fudud la soco haddii arrin dhib ahi dhacday. Barnaamijkeena joogtada ah ee PDCA wuxuu shaqaalahayaga siinayaa fursad ay ku hormariyaan naftooda taas oo ka faa'iideysan doonta Korinta oo keliya laakiin sidoo kale macaamiisheena.
● 4. Qalabka, waxaan leenahay mashiinnada shaabadaynta, goynta laser iyo mashiinnada foorarsiga, Daawooyinka kuleylka CNC, shiididda iyo mashiinnada goynta siligga, alxanka dusha sare ee khadadka isku-darka iyo wixii la mid ah .Sababtoo ah habka isku-dhafan waxaan si fudud u bixin karnaa tayo wanaagsan , qiimaha tartanka iyo waqtiga gaarsiinta gaaban ee macaamiisheena.
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Guga Saxanka, Boolal, Aluminium CNC Qaybo Machined, Dhimashada Magnesium, Sheet Birta Stamping Products, Dhammaan Alaabta